दृष्टिकोण – Banking Khabar
रमेश कुमार पोखरेल । बीमितको काबु बाहिरको घटनाबाट श्रृजना हुन सक्ने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न प्रवन्ध गरिएको जोखिम हस्तान्तरण सम्बन्धी संयन्त्रलाई बीमा भनिन्छ । बीमा बचत हो, लगानी हो, जोखिमबाट बच्ने सुरक्षा कवच हो । बीमा न्यून आय भएका व्यक्तिहरु प्रति लक्षित भए लघुबीमा हुन्छ । यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता विपन्न र न्यून आय
रमेश कुमार पोखरेल । न्यून आय भएका व्यक्ति र उनीहरुबाट सञ्चालित लघु व्यवसायलाई दृष्टिगत गरी प्रवन्ध गरिएको बित्त व्यवस्था नै लघु वित्त हो । लघुवित्त व्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको गरिबी निवारणको सशक्त औजार हो । यसले एकातिर वित्तीय श्रोत को माध्यमबाट स्वरोजगार श्रृजना गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ भने अर्कोतिर
नयाँ मौद्रिक नीति र यसले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावहरु
uढुन बहादुर बुढाथोकी, “संघर्ष” । २०७६।७७ को मौद्रिक नीति गर्भनर डा. चिरिन्जीबी नेपालद्धारा साउन ८ गते प्रश्तुत भईसकेको छ । मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार गठन पश्चातको दोस्रो मौद्रिक नीति हो, यो । नेपाल राष्ट्र बेंक ऐन, २०५८ ले गरेको ब्यवस्था अनुरुप २०५९÷६० देखि सर्बसाधरणको जानकारीका लागि बार्षिक मौद्रिक नीति सार्बजनिक हुँदै आएको
अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ बजार, संख्या र नेपालको बैंकिङ अवस्था
पर्शुराम कुवँर, बैंकर । संघीय संरचना अनुरुप नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने बैक तथा वित्तीय सस्थांको संख्या चाहिने भन्दा बढी देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीति मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा एक बैकको शाखा अनिवार्य खोल्ने निर्देशन दिएता पनि पुर्ण रुपमा कार्यन्यवन भइसकेको छैन । केही स्थानियतहहरुमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्न नै
‘मेगा मर्जरको नाममा विकास बैंक र वित्त संस्थालाई निल्ने काम हुँदैछ’ : नर बहादुर थापा
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुको मर्जरका लागि भन्दै प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था भएसँगै अहिले बैंकर्सहरु उत्साहीत देखिएका छन् । यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरको होडबाजीले विकास बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुको अस्तित्व नै गुम्ने
बैंकमा सुन निक्षेप राख्न नीतिगत व्यवस्था बाधक
बैंकिङ खबर । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट मार्फत सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा जम्मा गर्न मिल्ने भनेर उल्लेख गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकले माद्रिक नीतिमा सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा राख्नको लागि कुनै पनि नीति गत व्यवस्था गरेको छैन् । व्यवहारिक कठिनाईहरु भएको कारणले नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गर्न नसकेको डेपुटी गभर्नर
‘सिइओ पदको लोभमा होइन, दक्षताको आधारमा काम गर्नुपर्छ’
पर्शुराम कुँवर क्षेत्री, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर भनेको धेरै ठुलो काम हो । अर्थतन्त्रको र समयको आवश्यकता अनुसार बैंकहरु मर्जर भइरहेका छन् र भोलिका दिनमा पनि हुन्छन् । ठुलो काम गर्दै जादाँ कर्मचारी समायोजन, कार्यसमितिको प्रमुख पदमा को हुने जस्ता सानो तिनो झन्झटमा अल्झिनु हुदैन् ।
‘पैसाको महत्व बुझ्न वित्तीय जागरण अत्यावश्यक’
डा. चिरञ्जीवी नेपाल, गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक । वित्तीय जागरण बिना कुनै पनि क्षेत्रको विकास गर्न असहज हुन्छ । नेपालमा वित्तीय जागरण धेरै नहुनाले हामी धेरै पछि परेका छौँ । धनी हुन सबैलाई मन हुन्छ तर धन कमाउने तरिका भएन भने मन भएर मात्रै हुँदैन । त्यसैकारण वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ । अहिले व्यवसायको जमाना
लघुवित्त बैंकिङको क्षेत्र र यसको मर्जर
तेजेन्द्र शर्मा लम्साल । लघुवित्त बैंकिङमा १०।२० जना विपन्न परिवारका महिलाहरुलाई ५।७ दिन तालिम दिई एक समूह बनाइन्छ । सामुहिक जमानीमा उनीहरुको रकम परिचालन गर्नसक्ने क्षमताको आधारमा ४०।५० हजारको कर्जा शुरु गरि क्रमशः रकम बढाएर २।३ लाखसम्म विना धितो कर्जा प्रवाह गरिएको हुन्छ । कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता नभएका र बेरोजगार वा निवार्हमुखी
देवेन्द्रप्रताप शाह / चालु आर्थिक बर्ष नेपालका बैंकहरुको लागि तनावपुर्ण रह्यो । निक्षेप, तरलता, ब्याजदर, ब्याजदरको अन्तर गरी एक पछि अर्को संकट, सहुलियतपुर्ण कर्जा तथा, भुकम्प पिडित कर्जा आदिले नेपालका बैंकहरुलाई थिलथिलो नै बनायो । केही बर्ष यता नेपालमा नियमनकारी निकाय आक्रमक ढंगबाट काम गर्दैछ । उसको अत्यधिक सकृयता आवश्यक वा अनावश्यक दुबै तर्फ तर्क
अर्बिन अर्याल । अर्थतन्त्रको अहिलेको आवश्यकता वित्तीय सेवाको बिस्तार गरि दूर–दराज सम्म सेवा पुर्याउनु हो वा वित्तीय सस्थांहरुको बिस्तार या वित्तीय सस्थांको सबलिकरण यो सख्यात्मक न्यूनिकरण हो । यो संग–सगै कुनै पनि वित्तीय सस्थाको उदेश्य के हो भन्ने कुराको एकिन हुन जरुरी छ । वित्तीय संस्थाको मर्जर र यसको आवश्यकता अहिले बजारमा रन्केको मर्जरको आगोकोे कारण के
लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकको संख्या घटाउने भनेर मर्जरको लागि बैंकहरुलाई आग्रह गर्ने मर्जरमा प्रोत्साह गर्ने काम गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति भन्दा अगाडि मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता आओस् भन्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको हो । बैंकहरुले मर्जरको प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्नु भन्दा अगावै गरेदेखि मर्जर सम्वन्धी नीति
मर्जरको पहलमा प्रश्न उठाउन जरुरत छैन, तर त्यसमा स्पष्टता चाहियो– मनोज ज्ञवाली
बैंकिङ तथा पुँजी बजार करिब २० बर्षको अनुभव रहेको ज्योति विकास बैंकका मुख कार्यकारी अधिकृत तथा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशनका महासचिव मनोज ज्ञवालीको बिग मर्जर तथा एक्विजीस बारे धारणाः नियमनकारी निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तत्काल मर्जर सम्बन्धी निर्णय लिएर पेश गर्नु भनेर १२ असार २०७६ मा सबै संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई अनिवार्य उपस्थित
ठुला बैंकहरु मर्जरमा गएको नै राम्रो– ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगाना
बैंकिङ खबर । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको आवश्यकता के छ र मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई नियमक निकायले के कस्तो सुविधा दिएर मर्जरमा प्रोस्ताहित गर्ने आवश्यक छ भन्ने विषयमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंकलादेश बै.कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाको विचार : यस बर्षको बजेटमा ठुला बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिने छ भनेर उल्लेख भएको छ । त्यसैलाई
बैंकिङ खबर । वित्तिय बजारमा ठुला बाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भएको र अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भइरहेको भनेर नियमक निकाय र सरोकारवाला संघ संस्था व्यक्तिमा चर्चा भइरहेको छ । हाल नेपालमा संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बैंकिङ क्षेत्रको लागि आवश्यक हुन् या होइनन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर किन आवश्यक छ त ? यस बिषयमा के